Ihe nzuzo nke mmekọrịta ọha na eze nke British Petroleum
Satọde, 5 Juun 2010 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 19, 2012 Douglas Karr
Onye isi ala Obama kwuru n’izu a na BP amalitela $ 50 nde dollar na mgbasa ozi. Ndị Whitehouse na Onye isi ala na-agagharị na njem a, na-akatọ ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi maka itinye ego na ndị ọka iwu na azụmaahịa karịa itinye ego ahụ ebe ọzọ.
Ọ bụ ezie na mgbasa ozi na-awụli elu na bandwagon, ha na-akwa emo BP Tony Hayward maka ịbụ akụkụ nke azụmahịa ọ bụla, ajụjụ ọnụ na mmekọrịta ọha na eze na telivishọn, na mbipụta na ntanetị BP amalitela Youtube ọwa kpọmkwem maka nsogbu ahụ, na-enweghị onye ọ bụla ọzọ bụ Tony Hayward.
Tony Hayward emeela ụfọdụ nnukwu ihe - gụnyere ịkọwa na ọ chọrọ nwetaghachi ndụ ya - okwu ndi ruuru obi nke ndi oru iri na otu ahu ndi furu efu na oku mbu. Fọdụ ndị mmadụ na-akpọ ka Tony Hayward chụọ ya n'ọrụ, ụfọdụ na-akpọdị ka gọọmentị weghara ụlọ ọrụ ahụ.
Gini mere Tony Hayward ga-eji buru ihu BP?
Ọ dị ezigbo mfe site na mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze. BP na-agba chaa chaa na Tony Hayward ka ọ bụrụ onye ọdịda maka ụdị na ụlọ ọrụ ahụ. Maka afọ na-esote ma ọ bụ karịa, anyị ga-ahụ ọtụtụ Tony Hayward. Ọ naghị aga ebe ọ bụla (belụsọ na atụmatụ a na-eme akụkọ). BP ga - enyerịrị aha ọzọ mgbe nsogbu ahụ gasịrị - mana site ugbu a na mgbe ahụ, azụmaahịa ọ bụla ya na Hayward na ya, mkparịta ụka ọ bụla na Hayward, ụda ọ bụla na-egosi Hayward na mgbasa ozi ọ bụla nke Hayward na-etinye ebe dị anya n'etiti ndị na-ere ngwaahịa, ụlọ ọrụ ahụ na onye isi ya ugbu a. .
Na njedebe nke ụbọchị, a ga-akwụ Tony Hayward ụgwọ nke ukwuu maka ịbụ onye BP nwụrụ. Kaa okwu m na platinum parachute nke a na-emepe emepe ugbu a ga-eme ka ụlọ nzukọ nwee ihere. Ndị na-ere ngwaahịa ga-eji ọlyụ kwụọ ụgwọ ya, ebe ọ bụ na martyr's martyr nwere ike kpuchie ụfọdụ nfu mgbe nsogbu a gafere. Onye isi oche ọhụrụ ahụ ga-abata, jupụta nke ochie, weghachite ụlọ ọrụ ahụ, wee bido ịmịkọrọ ọtụtụ ijeri n'ala ọzọ.
Nsogbu bụ na enwere usoro ọdịbendị na njikwa ogologo na BP nke butere ọdachi a. Ndịàmà ekwuola na njikwa BP na ọdụ mmanụ abụghị naanị na ha maara nsogbu nchekwa, ha na Transocean (ndị nwe Deepwater Horizon) rụrụ ụka tupu mgbawa ahụ agbawa. Ihe mgbaru ọsọ bụ iji nweta mmanụ ahụ ngwa ngwa o kwere mee iji nweta dollar ndị ahụ na-asọ… n'agbanyeghị nchekwa. Tony Hayward nwere ike ịnọ n'ogo ahụ, mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ n'ime nzukọ ahụ.
Ọ bụrụ na ọ naghị asọ oyi, ọ ga-abụ ihe na-akpali akpali mmekọrịta ọhaneze. BP ga-alaghachi na uru (ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmanụ ọzọ zụta ya), Hayward ga-ala ezumike nká karịa ka ọ cheburu, Onye isi ala agaghị enwetaghachi ya ọzọ, ndị mmadụ nke gulf ndị dabere na akụ ndị sitere n'okike agaghị agbake na ndụ ha.
BP Logo bụ ntinye site na BP Logo Design zoo site na Akara My Way.
Jun 8, 2010 na 5: 08 PM
Achọpụtara m na ọ na-adọrọ mmasị karị na ha na-azụta mkpụrụ okwu niile na PPC. Chọọ google maka isiokwu niile metụtara ya dị ka "mmanụ mmanụ" ma ha ziri ezi n'elu. O yiri ka ha kwenyere na ihe mere ndị mmadụ ji agụ akụkọ ma ọ bụ echiche sitere na ụlọ ọrụ ndị ọzọ mgbe ha nwere ike iru ma kọwaa mbọ ha. O di ka ezigbo atumatu.
Jul 26, 2010 na 10:14 PM
Ikiri @andersoncooper na odi ka m kwuru eziokwu… Hayward na-ele anya inweta $ 18 na uzo BP.